Xildhibaano: Nigeria waxay khatar ugu jirtaa in ay noqoto sida Soomaaliya
Xildhibaano: Nigeria waxay halis ugu jirtaa in ay noqoto sida Soomaaliya
By WARIYAHA ABUJA , GAROWE ONLINE
Sharci-dejiyeyaasha ayaa ku baaqay in la kala diro taliyeyaasha ciidanka si loo wajaho amni darada.
ABUJA, Nigeria – Mudaneyaasha baarlamaanka dalka Nigeria ee Galbeedka Afrika ayaa kusoo biiray mas'uuliyiinta qaar kamid ah wadamada caalamka ee ku oor-kacsanaya xaalada ay hada ku sugan tahay Soomaaliya.
Sharci-dejiyeyaasha Golaha Wakiilada oo fadhi ay maanta yeesheen kasoo saarey qoraal wadajir ah ayaa carabka ku dhuftay "in waddankooda uu halis ugu jirto in uu lamid noqdo midkood Soomaaliya ama Rwanda".
Sidda uu wariyey bogga Thisdaylive.com, golahaan wuxuu si gaar ah walaac uga muujiyey xaalada amni darro ee u muuqata mid faraha kasii baxeysa.
"Golaha wuxuu ku nuux-nuuxsaday in mowjadaha amni darro ay gaareen meeshii ugu sareysay, wuxuuna intaas ku darey hadii aan si deg-deg ah wax looga qaban karo ay Nigeria khatar ugu jirto in ay ku socoto wadada Rwanda ama Soomaaliya," ayaa lagu yiri warbixinta lagu daabacay mareega.
Madaxweyne Maxamaduu Buhaari ayay ugu baaqeen in uu kala diro taliyeyaasha ciidamadda soona magacaabo xubno cusub oo isbedel la yimaada.
Qaylo-dhaantan ayaa kusoo hagaageysa xilli todobaadkii hore weerar ay kooxda Daacish sheegtay lagu dilay askar badan. Hujuumkaas lala eegtay kolanyo ciidan wuxuu ka dhacay magaalada Baga ee gobolka Borno.
Maleeyshiyaadka dusha saartay weerarkan ayaa ka go'ay falaagada Boko Xaraam kuwaasoo gacansaar la leh shabakadda argagixisada ee Al-Qaacida.
Nigeria iyo Soomaaliya ayaa ka siman la dagaalanka kooxaha argagixisada ah kuwaasoo ah khatarta ugu balaaran ee ammaanka wadamadan, iyaddoo Mareykanka uu yahay xulafada ugu balaaran ee ka taageera ololahan.
Burcad-badeeda Soomaalida oo "u wareegtay" xeebaha Nigeria
Afrika 12.10.2020. 17:00
Shufta-badeeda ayaa u muuqaneysa mid isku dayaysa in ay balaariso howlgaladeeda.
Madaxweynihii hore Nigeria oo booqasho ku tegay Somaliland
Somaliland 06.05.2019. 04:58
Senator reer Nigeria ah: Soomaaliya waa mid, Guinea way khaldan tahay
Afrika 06.07.2019. 23:05
100-jir xabsi ugu jirtay 18-sano maleegida dil oo cafis loo fidiyey
Afrika 08.06.2019. 13:44
Guddoomiyaha Barlamanka Puntland oo Nigeria u dhoofay
Puntland 18.01.2018. 21:13
Dad ku dhintay diyaarad ku dul-dhacdey guri ay shacab degan yihiin
Afrika 30.08.2020. 10:20
Soomaaliya oo lagu daray "horyaalka dalalka ay burburiyeen argagixisada"
Soomaliya 03.10.2020. 09:24
Wasiir Nigerian ah oo tusaale aan fiicneyn u soo qaatay Soomaaliya
Afrika 31.07.2020. 19:55